C/casiis Samaale oo ka hadlay rejada KULMIYE, Burburinta Hantida Danyarta Hargeysa iyo ku-milanka Wakiillada ee Xukuumadda | Berberanews.com
Home WARARKA C/casiis Samaale oo ka hadlay rejada KULMIYE, Burburinta Hantida Danyarta Hargeysa iyo...
C/casiis Samaale oo ka hadlay rejada KULMIYE, Burburinta Hantida Danyarta Hargeysa iyo ku-milanka Wakiillada ee Xukuumadda
“Waxaan u arkaa tallaabiyoonka ay dawladda hoose iyo Wasaaradda daakhiligu fuliyeen kuwo loo baahnaa…” C/casiis M. Samaale.Hargeysa-(Berberanews)- Guddoomiye Ku-xigeenka koowaad ee Golaha Wakiillada Somaliland Md. Cabdicasiis Maxamed Samaalle, ayaa gaashaanka ku dhuftay wax uu ugu yeedhay fikrado ku saabsan in Mudanayaasha Wakiilladu isu beddeleen KULMIYE, tan iyo markii ay dhalatay Xukuumadda Axmed-Siilaanyo ee Xisbigaa ka soo jeeddaa.
Guddoomiye Ku-xigeen Samaale waxa kale oo uu ka hadlay hannaanka Golaha Wakiilladu u shaqeeyaan, mustaqbalka Xisbiga KULMIYE iyo olalaha waddo banaynta ah ee Dawladda Hoose ee Hargeysa iyo Wasaaradda arrimaha guduhu ka fuliyeen jidadka badhtamaha Caasimadda. Hawl-galkaas oo uu ku sifeeyay mid loo baahnaa.
Guddoomiye Ku-xigeenku isagoo ka hadlayay habka ay Golahoodu u shaqeeyo wuxuu yidhi; “Waxa Golaha ka socdaa maaha mid Xisbi wato ama shaqsi wato ee waa wax gole waynuhu aqalibiyadda u arko. Runtii waa in sidaa loo fahmo. Markaa waxa gole weynuhu u arko in danta dalka iyo dadku tahay marka dood laga yeesho, ayaa golaha ka hirgala oo Xildhibaannadu way kala afkaar duwan yihiin, way kala fikir duwan yihiin, way kala talooyin duwan yihiin oo nin waliba xor buu u yahay taladiisa iyo fikirkiisaba inuu doodda ku muujiyo oo golaha ka muujiyo. Laakiin, aakhrika waxay tagaysaa muxuu gole weynuhu doonayaa?.”
Md. Cabdicasiis Maxamed Samaale, wuxuu sheegay in Xildhibaannada qaarkood marka Golaha ay ka socon weydo ay aqlabiyad u waayaan aragtidooda ay warbaahinta ka hadlaan, isagoo arritaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi; “Arrintaasna runtii goluhu aad buu isugu ixtiraamaa, inkastoo ay dabeecadda basharka iska tahay marka qofka matalan sida uu isagu wax u arkayey aqbaliyadda goluhu ay si kale noqoto ama qofkaasi warbaahinta ka hadlo oo fikiraddiisii oo awalba uu golaha ka jeediyey. Markay golaha ka socon wayday gole weynihii uu iska leh uu uga hadlo warbaahinta oo taana waa xorriyadda Somaliland oo qofku waxa uu doono iyo sida isaga ay wax la yihiin uu cabbiri karaa.”
“Shir-gudoonka iyo hadday tahay golaha-ba, goluhu muxuu aqlabiyaddiisu doonayaa ayaannu annagu hoggaaminnaa oo taas uun baa golaha ka hirgasha. Golaha aqalabiyaddiisaan saddexda Xisbi midna maaha, laakiin goluhu gole weyne ayuu ku shaqeeyaa oo wixii uu markaa danta u arko ayuun baa socota. Annaguna waxaannu ku khasban nahay in waxa markaa gole weynuhu ama qaybihiisa ama taladiisa ama go’aankiisa ayuun baan socodsiinnaa, waad arkagteen xitaa shir-guddoonka mararka qaarkood ayaa fikradaha meesha jira ayaannu fikrad ka duwan gacanta u taagnaa, laakiin aqallabiyaddu halkay martay ayuun baannu marka dambe raacnaa, taasuun baa go’aanku ku go’aa.”ayuu yidhi Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ee wakiiladdu oo shalay u warramayay HCTV.
Md. Samaale wuxuu gaashaanka ku dhuftay wax uu ku tilmaamay fikraddaha odhanaya Golihii wuxuu isu bedelay xisbiga KULMIYE, waxaanu yidhi; “Goluhu muddada uu jiray la heli maayo go’aan golaha ka baxay oo aqallabiyadda golaha aan lagu ansixin, yacni mid hore iyo mid dambe-ba. Markaa taasi waxay ku tusaysaa in goluhu runtii yahay gole qaran oo si qaran u shaqeeya waxa uu ka doodaana maxay u arkayaan goluhu? Waxay u arkayaan dantii oo waa go’aanka shaqeeya, markaa waxaan odhan karaa dareenka ama fikradda odhanaysa talo intii KULMIYE uu xillka qabtay goluhu KUMIYE ayuu isu beddelay sax maaha. Goluhu waa golihii Qaranka oo waa sidiisii oo goluhu waa uu doodda oo wixii uu arko fikirka taagan ayuu ku go’aan-qaataa.”
Guddoomiye Ku xigeenka Koowaad ee golaha Wakiiladda oo ka jawaabayay su’aal ahayd sida uu u arko mustaqabalka Xisbi-xaakimka KULMIYE, waxa uu yidhi; “Xisbiga KULMIYE ee aan ka tirsan nahay oo aan aasaaseyaashiisii ahay waan ku faanayaa Illaahay mahaddii in aan Xisbiga dadkii aas-aasayna ka mid ahay illaa immikana xubnihiisa firficoon ee xisbiga guusha la doonaya ka mid ahay.”
C/Casiis wuxuu tilmaamay in xisbiga KULMIYE yahay mid awood badan oo ay rejaynayaan inuu ku guulaysto doorashooyinka soo socda ee golaha deegaan, waxaanu yidhi; “Waa xisbul-xaakiim waa xisbi awood badan waa xisbiga aqlibiyadda dalka 50% helay guushii doorashaddii ugu dambaysay, waxaannu rejaaynaynaa inay samcaddiisu kor u sii kacdo oo ay sii wanaagsanaato. Waxaannu rejaynaynaa in doorashooyinka tan ka dambeeya aanu ku guulaysan doonno.”
Samaalle oo la weydiiyay sida uu u arko hawl-galka waddo banaynta iyo kor u qaadista bilicda lagu sheegay ee dawladda hoose ee Hargeysa ka fulisay jidadka faras-magaalaha caasimadda oo dad badan oo dan-yar ah quutal-daruurigoodii galaaftay, wuxuu yidhi; “Dadkeennu dad danyar ah ayay isaga badan yihiin in aad iyo aad loo xaq-dhowro oo loo ilaaliyo weeye, in xaaladahooda xoog loola socdo weeye, in wax lala qabto weeyaan. Laakiin, waa in aanay ka hori man danta caamka ah ee ay ummaddu wada leedahay oo ay ka mid tahay magaalada Hargeysi waa Caasimaddii Somaliland oo dalkan waxa uu baahan yahay in la aqoonsado, haddii qof waliba meel alaale iyo meesha uu doono ka dego oo waddada badhtankeedii dego oo ay waddooyinkii wada xidhmaan dhismayaashii waaweynaa ee magaalada laga dhisay ay shaqayn waayaan, waxaad dareemi karaysaa inaan runtii dawladnimadii, Caasimadnimadii iyo dalkiiba aanu shaqaynayn.”
“Anigu waxaan u arkaa tallaabiyoonka ay dawladda hoose iyo Wasaaradda daakhiligu fuliyeen tallaabooyin loo baahnaa, waxaan qaba in ummada danteedu ay ku jirto calool-adayg oo in la calool-adaygo oo hawsha sideeda loo fuliyo oo sidaa loo fuliyey lagu sii wado oo dadka danyarta ee dhulka laga kiciyey meelo kale la dejiyo ayey dantooda ku maarayn karaan, waa in loo raadiyo.” ayuu yidhi Guddoomiye Ku-xigeen Samaale.
Md. Samaale oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi; “Waxaan qabaa dawladda hoose iyo Wasaaradda daakhaliga in aanay dhicin in dib dhulka ay baneeyeen loo soo dego in aanay dhicin oo aanay noqon wax inta laga kiciyey hadanna muddo yar dabadeed dib loo soo dego, taasi haddii ay dhacdo waxa ku ceeboobi doona dawladda hoose iyo Wasaaradda arrimaha gudaha, ceeb weyn ayaa ka raaci-doonta.”
Previous articleMiisaaniyadda Qaranka 2012 oo dhaqaale badan loogu daray wax-ka-qabashada baahiyada Caafimaad ee dalka.
Next articleWariyaal caalami ah oo Al-Shabaab ka dib booqday Baydhabo